Kurwara Uye Kuneta KweSpyware Uye Adware? - Semalt Inopa Mazano Pamusoro Pokuti Ungatore Sei Utano Hwako Utano
Malware inowanzoreva spyware uye zvirongwa zveadware zvinowanikwa mumakombiyuta uye zvinokonzera zvinetso zvakakomba kune vashandisi. Mapurogiramu akadaro anogona kuchinja mararamiro ako, nekugadzira mapeji ewebhu asina kushandiswa uye kuchinja mafaira ehurumende zvakanyanya.
Alexander Peresunko, Mutengi Wekugutsikana Kwevatereji Semalt Dhidhijiti Dhidhiyo, inotaura kuti yakawanda yemakombiyuta ane utachiona inoratidza zvisingazivikanwi uye zvinotambudzwa mabhidhiyo pamwe nekudhura kwepad-up. Zvishandiso zvekushandisa malware zvinowedzera zvinoshungurudza uye mapenzi mapeji ewebhu kumapuranga ako ega uye vanokukurudzira kuti uzvisarudze nguva imwe neimwe.
Kuwedzera uye kuparadzira zviziviso
Kufukura uye kuparadzira zvipikiso kune nhamo sezvavanoparadza kombiyuta yenyu uye mabasa ayo zvakanyanya - vapers delight essential. Malware kazhinji inopinda muchina wako wekombiyuta kuburikidza nemakungwa anokonzerwa kubva paInternet muchiverengo chikuru. Vashandi vakasiyana-siyana vanosarudza pa "Ndinobvumirana" uye "Ndinogamuchira" mabhodhi maitiro pasina kana kuverenga yakareba zvibvumirano. Vose vari pasi-speed uye vashandi vekutsvaga paIndaneti vanobatwa nemavirusi uye malware nekuda kwekushaya kunzwisisa kwezvakavakwa mumoto. Iwe haufaniri kutora chero chinhu kumakombiyuta yako usina kuziva zvose pamusoro payo. Kana zvisina kudaro, iwe unofanirwa kutarisana nezvinetso, uye hapana chirongwa chinonzi antivirus chichakuponesa.
Kana iwe uri kushamisika kuti ndeupi rudzi rwekuchengetedza huripo pakurwisa malware, rega ndikuudze kuti iwe unofanirwa kuisa zvidziviriro zvako..Virusi uye malware vanowana nzira yavo yekupinda kombiyuta yenyu; kunyange iyo inotungamira inyanzvi nemitambo haigone kukuchengetedza iwe kusvikira watora matanho iwe pachako. Iwe unofanirwa kuongorora network traffic uye kuvhara mahwindo ose asingazivikanwi paunenge uchitsvaga mawebsite ako aunoda. Iwe unofanirwawo kuva nemoto-moto uye pop-up blockers uye unozvichengetedza kuti varambe vakachengeteka paIndaneti. Nyanzvi dzekombiyuta dzinotaura kuti tinofanira kuchengeta malware kure nekuvandudza ma browser edu nema software kaviri pamwedzi.
Mumwedzi ichangopfuura, mamwe mabhizinesi akabatana nehuwandu hwezvinodhaka zvinokonzera malware. Saka, vakasarudza kusimbisa mitemo yavo uye vakakumbira vashandi vavo kuti varege kutora zvirongwa zve malware kubva paIndaneti. Vakadzivirirawo vashandi vavo kuti vasawana nekuzarura nzvimbo dzevanhu vakuru uye dzekubhejera dzinogona kuva nemavhivirisi munhamba huru. Chinangwa ichi kuchengetedza masangano avo akachengetedzwa gore rese. Vashandi vari kubiridzira pahurongwa hwavo vangangodzingwa kubva kusangano. Vanogonawo kubhadhara zvinokanganisa kuitira kuti vamwe vazive zvazvinofanira kuitwa munguva yemberi.
Faira Kugovana Njodzi
Mazuva ano, vanhu vanogovera mafaira akawanda kuburikidza nehutano hwemasero akadai saKaaa, iMesh, Morpheus, eDonkey, Grokster, Gnutella, uye LimeWire. Nezvebhizimisi kana zvinangwa zvako pachako, kana iwe uchigovera mafaira iwe unogona kutora mavhairasi uye malware kune kakombiyuta yako. Zvakakosha kudzivisa kutora mafirimu emumhanzi asingabvumirwi nemutemo, mitambo yemavhidhiyo, software, uye mafirimu. Nyanzvi dzekombiyuta dzinotaura kuti hatifaniri kutora zvidzidzo zvisingazivikanwi nemapurogiramu sezvo zvingakanganisa kana kuparadza masimba edu ekufunga mune imwe nzira kana vamwe. Somuenzaniso, avo vane tsika yekudzivirira mafaira e MP3 vanofanira kusarudza nzvimbo dzekutendeseka dzezvinhu zvakadaro. Kuomushandisi wenguva dzose yepakombiyuta, hazvisi zvakaoma kuwana nzvimbo mumumhanzi wemimhanzi ayo ari maviri-user friendly uye makombiyuta-ane ushamwari. Spyware ndeimwe yezvinyorwa zvekutsvaga peer-to-peer mafaira. Vashandisi veIndaneti havazivi kuti vangabvisa sei spyware inopinda mumashandi avo zuva nezuva. Nzira yakanakisisa yekuidzivisa iri kushandisa mawebsite akachengeteka uye akachengeteka uye kuverenga kombiyuta yako yega d
ay. Maererano neDDC, vashandi vanopfuura makumi manomwe zvezana mabhizinesi vanoshandisa pachena uye vashandi-kutumira purogiramu yemeseji mapurogiramu, izvo zvingasava zvakanaka pamakombiyuta kana mafoni.